Dowlada Somalia ayaa u magacowday guddi qaran oo ka shaqeeya aaska RW hore ee Somalia… – Hagaag.com
Dowlada Somalia ayaa u magacowday guddi qaran oo ka shaqeeya aaska RW hore ee Somalia…
Posted on 9 Oktoobar 2020 by Admin in National // 0 Comments
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magacaabay Guddi Qaran oo ka shaqeynaya Aaska loo sameynayo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Guddigaan oo ka kooban 13 xubnood ayaa loo xilsaaray inay diyaariyaan aaska qaran ee Ra’ iisul wasaarihii hore Cali Khaliif, iyadoo aaskiisa loo maamuusi doono si ka duwan aasaskii qaran ee loo sameeyay madaxdii hore maadaama marxuumku u geeriyooday Covid19.
Waa Ra’ iisul wasaarihii labaad ee Soomaaliya soo mara oo u geeriyooda covid19, waxaa horey cudurkaan ugu geeriyooday Ra’iisul wasaare Nuur Cadde, bishii April ee sanadkan.
Dhinaca kale Maamulka Dowlad Deegaanka Soomaalida ayaa shaaciyay in Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr uu u geeriyooday cudurka Covid-19.
Wasiir ku xigeenka caafimaadka dowlad degaanka Soomaalida Dr. Mukhtaar Yuusuf Muuse oo ka mid ah guddi loo xilsaaray baaritaanka sababaha keenay geerida Marxuum Cali Khaliif ayaa sheegay in labadii maalmood ee ugu dambeysay uu la xanuunsanayay marxuumku covid-19.
Allaha u naxarisitee Marxuuma Cali Khaliif Galeyr ayaa noqonaya siyaasigii saddexaad ee soo qabta xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya labaatankii sano ee u dambeeyay oo sanadkan geeriyooda, waxaana sanadkan geeriyooday allaha u wada naxariistee Xasan Abshir Faarax iyo Nuur Xasan Xuseen,”Nuur Cadde”.